DeepCoder izao dia afaka mamorona programa sy fampiharana azy manokana | Vaovao momba ny gadget
Isan'andro dia misy vahaolana vaovao sy mahatalanjona aseho izay tian'ny mpamorona hanamora ny fiainantsika. Ity no làlana izay arahin'ny faharanitan-tsaina artifisialy ary, tsy isalasalana fa, tsy fahita firy ny andro izay tsy ahagagaan'ny ekipa sasany antsika zavatra vaovao. Amin'ity indray mitoraka ity dia te hiresaka aminao aho Deepcoder, sehatra noforonin'ny Microsoft Research miaraka amin'ny University of Cambridge any Angletera izay afaka mamolavola programa informatika.
Tokony hiaiky aho fa ny hevitry ny rafitra iray mahavita fandaharana dia zavatra misarika ny sain'ny maro satria miresaka momba ny iray amin'ireo olana sarotra indrindra amin'izao fotoana izao isika, na dia maro aza ireo mpandahatra programa, tena vitsy no tena mahalala azo antoka fa inona no ataon'izy ireo. Miaraka amin'ity sehatra ity ary amin'ny fanomezana vitsivitsy fotsiny torolàlana voalohany ho lasa mora kokoa ny zava-drehetra.
DeepCoder dia efa mahay mamaha olana tena tsotra amin'ny fampiasana rindrambaiko.
Mba hampivelarana ny DeepCoder, nanapa-kevitra ny mpamorona azy ireo hampiasa teknika fantatra amin'ny hoe fandaharana synthes, fomba fiasa iray, hiantsoana azy amin'ny fomba hafa, izay ahafahan'ny solosaina mandahatra fandaharana ho azy. Amin'izany ao an-tsaina izany dia lazao anao fa ny tena zava-miafina artifisialy ao ambadik'i DeepCoder dia ny mikaroka angon-drakitra kaody hananganana rindrambaiko manokana afaka mamaha olana tsotra.
Araka ny hitanao tamin'ny andalana teo aloha ary, raha niaiky ny mpamorona azy, amin'izao fotoana izao ny marina dia mbola tsy mahavita mamaha olana sarotra kokoa i DeepCoder satria manana fetra maro. Amin'izao fotoana izao, raha toa ka developer ianao dia liana amin'ity ampahany ity, ny mpamorona azy dia tsy liana amin'ny DeepCoder manaisotra ny asanao, fa azonao atao ny mampiasa azy amin'ny asa mahazatra ary manokana ny tenanao manontolo amin'ny asa sarotra kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » DeepCoder dia afaka mamorona ny programa sy ny fampiharana azy manokana
Izany dia mandritra ny fotoana fohy, saingy fantatro ny sain'ny mpandraharaha iray ary raha afaka manao ny an'ny developer ny rindrambaiko ho avy, angamba hanokan-tena amin'ny fanaovana calculatera ??? #TechnologyandFuture